Xildhibaan Sardheeye oo wareejiyay xilkii gudoomiyaha daladda dhalinyarada Puntland – Kalfadhi
February 24, 2019 February 24, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Xildhibaan Aways Axmed Sardheeye oo ka mid ah mudanayaasha dhalinyarada ah ee horaantii sanadkan ku biiray baarlamanka ayaa wareejiyay masuuliyadda ugu saraysa ee daladda dhalinyarada Puntland oo uu madax ka ahaa.
Xildhibaano ka tirsan baarlamanka iyo wasiiro hore ayaa ka qaybgalay xilwareejinta.
Munaasabad ka dhacday Garowe ayaa Xildhibaan Sardheeye wuxuu ku wareejiyay xilka ku xigeenkiisii oo sida xeer-hoosaadka dalladaas uu dhigayo isagu noqonaya gudoomiyaha, hadii uu gudoomiyuhu sifadaas oo kale meesha uga boxo.
Xildhibaanku wuxuu u jeediyay dhalinyarada Puntland in ay la shaqeeyaan madaxda cusub, si ay u sii socdaan dadaalada horumarinta dhalinyarada iyo hawlaha dalladu.
Daladda dhalinyarada Puntland ee PYAN waxaa markii ugu horaysay la unkay 2015, markaas oo gudoomiye KMG ah mudo sanad ah loogu doortay mudane Sardheeye, isla sanad kadibna doorasho dhacday ayuu ku helay kalsooni uu ku shaqayn karo laba sano oo kale.